Shamarraan 38 odoo gara ayyaana mooticha Suwaslaand deemanii dhuman -
Shamarraan 38 odoo gara ayyaana mooticha Suwaslaand deemanii dhuman
Kibba Afrika biyya Suwaslaand ja’amtu keysatti shamrren 58 Motichi biyya sani isaan keysaa takka laallate akka fudhuuf oso deemaa jirani konkololaata walitti bu’een dubritiin 38 du’anii 20 ammo gar-male kan madaawan tahuun isaanii gabaafame jira.
Sirna waggaatti dubartota heddu walitti qabudhaan tokka keysaa lallate Motichi fuudhuu kanaa warri mirga dhala namaaf yaadu balaaleyfatani jiru.
Akkuma yaadatamuu biyya suwaasland keysatti waggatti al-tokko shamarronni hedduun moticha biyyatti fulletti harma qullaa kan shubbisan hoggaa tahuu sababni isaas isaan keysaa takka laallate akka fudhuuf ja’ame jira.
Garuu Motichi kun waggaa barana takkalle keysaa laallachuu hin dandenye .
Sababni isaas hundi isaanii makiinaa wal rukute keysatti garii dhumani kaan waan miidhamaniif ja’a burqaan Oduu france 24
Previous Lensa’s story about Oromia and her search for her mother
Next Matiiwwaan Hiidhaamtoota Kofalee fi Asaasaaf Degarsi Malaqaa Tasiifame.